Nwelite ngwa ngwa kachasị ọhụrụ AtomOS 10.63 na-enye ohere ProRes RAW ndekọ si Atomos Ninja V na Panasonic LUMIX S1 | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Mgbasa Injinia Mgbasa Ozi
Home » News » Nwelite ngwa ngwa kachasị ọhụrụ AtomOS 10.63 na-enye ohere maka ndekọ ProRes RAW site na Atomos Ninja V na Panasonic LUMIX S1
Nwelite ngwa ngwa kachasị ọhụrụ AtomOS 10.63 na-enye ohere maka ndekọ ProRes RAW site na Atomos Ninja V na Panasonic LUMIX S1
Atomos na-ekwuwapụta Apple ProRes RAW ndekọ site na LUMIX S1 na mmelite kachasị ọhụrụ AtomOS 10.63 dị ugbu a maka Ninja V. Mgbe ejikọtara ya na Ninja V, etiti LUMIX S1 ga-enwe ike ịdekọ ihe ruru 5.9K ProRes RAW.
Panasonic LUMIX S1, igwefoto ngwakọ kachasị na Panasonic maka enyo na-enweghị enyo, na-ekerịta otu atụmatụ ProRes RAW site na nnukwu nwanne ya, bụ LUMIX S1H. Ya mere, ọ ga-edekọ ihe ruru 5.9k ProRes RAW mgbe ejikọtara ya na Ninja V. Tinye na nke a nkwado nke anamorphic RAW; ndị ọrụ nwere ike irite uru site na ụwa ka ukwuu nke ohere ịme ihe nkiri mgbe ijikọ S1 na Ninja V.
Na mgbakwunye na nke a, LUMIX S1 na-ebupụta isi ihe igwefoto S Series nke Panasonic dị na igwe magnesium nke zuru oke na-ekpo ọkụ na mgbasa ozi ọkụ dị ọkụ maka ogologo oge ndekọ. Ngwakọta S1 na Ninja V na-enye ndị ọrụ vidiyo na ndị ọkachamara vidiyo na-achọ ọrụ dị ike, na-efu ọnụ, ma na-enwe kọmpat.
Ninja V uru
Ninja V na-enye ndị ọrụ ohere inyocha ihe ngosi RAW n'ụzọ ziri ezi na ihuenyo 5R 1000nit na-enwupụta nke ìhè HDR. Mbido dị mfe mgbe ejiri igwefoto jikọtara ya na ntọala agbazi nke ọma etinyere na akpaghị aka. Ndị ọrụ nwere ike ịlele foto RAW n'ụzọ ziri ezi na HDR na ụdị HLG ​​na PQ (HDR10). Ninja V na-enye nnweta mmetụ ihu na ngwaọrụ dịka ngosiputa igwe, ntanye 1-1 ma na elekwasị anya, na-enye ha ohere ịmecha vidiyo RAW ha. Ninja V na-edekọ data ProRes RAW na AtomX SSDmini na-ewepụ ma ọ bụ draịva ndị ọzọ SSD. Mgbe agbapụchara zuru ezu, ewepụ draịva ma jikọọ ya na kọmpụta site na USB maka ibudata na ịdezi ozugbo.
Jeromy Young, Atomos'CEO, kwuru, sị: "Obi dị m ụtọ na m ga-eweta ndụ ọzọ ese foto Panasonic S na-akwado ProRes RAW."
ProRes RAW na-aga n'ihu na-ewu ọkụ na 2021 nwere ihe karịrị igwefoto 20 na-akwado ya Atomos na ngwakọta ProRes RAW, na-eme ka ọnọdụ ya dị ka ọkọlọtọ ụlọ ọrụ maka vidiyo vidiyo RAW. ProRes RAW na-ejikọta uru anya na arụmọrụ nke vidiyo RAW yana arụmọrụ dị egwu nke oge ProRes. Usoro ahụ na-enye ndị na-eme ihe nkiri ohere dị ukwuu mgbe ha na-agbanwe ọdịdị nke onyonyo ha ma na-agbatị nchapụta na ndò zuru oke, na-eme ka ọ dị mma maka arụmọrụ HDR. Ma ProRes RAW na elu bandwit, obere abịakọrọ ProRes RAW HQ na-akwado. Nha njikwa ahaziri ahazi na-eme ka ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ, njikwa njikwa na nchekwa. A na-akwado ProRes RAW n'ụzọ zuru ezu na Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro na uchu Media andiwet, tinyere nchịkọta nke ngwa ndị ọzọ gụnyere ASSIMILATE SCRATCH, Colorfront, FilmLight Baselight na Grass Valley Edius.
Ndị ọrụ Panasonic LUMIX S1 ga-ahụrịrị na emelitere igwefoto ha na v2.0 *.
* Achọrọ Kwalite Ngwanrọ Software DMW-SFU2 (rere ya iche). Ndị ọrụ nwere DMW-SFU2 adịghị mkpa ịzụta DMW-SFU2 ọzọ.
Iji mee ka ProRes RAW na Atomos Ninja V imelite gị ileba anya-edekọ ihe na AtomOS 10.63 dị site na Weebụsaịtị Atomos.
Motion agaghị ekwe tọhapụrụ ọhụrụ dị ike Nova femụwe - April 7, 2021
Signiant na-agbatị ọnụnọ ya na Germany yana Onye Mmekọ Ọhụrụ, Ngwọta Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi na Ọrụ - April 7, 2021
Nwelite ngwa ngwa kachasị ọhụrụ AtomOS 10.63 na-enye ohere maka ndekọ ProRes RAW site na Atomos Ninja V na Panasonic LUMIX S1 - April 6, 2021
atọm Sistem Igwefoto zuru-oke LUMIX S1 Ninja V Panasonic ProRes RAW 2021-04-06
Previous: Chinese Video-nkekọrịta App Douyin na-eme Ka O doo-Com “Ngwọta Intercom kachasị amasị” ya
Osote: AKORKỌ Ihe Signrịba Ama Ihe ngosi nke ndị na-ese Ihe na McCormick Brothers